आईपिएल फाईनलनमा बुढो बाध र तन्नेरी स्यालको भिडन्त, कसले मार्ला बाजी ? - TajaKhabarTV
आईपिएल फाईनलनमा बुढो बाध र तन्नेरी स्यालको भिडन्त, कसले मार्ला बाजी ?
२०७८, २९ आश्विन शुक्रबार १९:०८ October 15, 2021 ताजा खबरक्रिकेट
काठमाडौं । इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) को फाइनलमा शुक्रबार साँझ चेन्नई सुपर किंग्स र कोलकाता नाइट राइडर्सबीच फाइनल खेल हुँदैछ । दुबईमा हुने फाइनल खेल नेपाली समयअनुसार साँ ७ः४५ बजे सुरु हुनेछ । उपाधि उचाल्ने योजनाका साथ दुवै टोली मैदान उत्रनेछन् ।
यदी आजको खेलमा सिएसकेले जिते कप्तान महेन्द्र सिंह धोनीले नयाँ इतिहास बनाउने छन् । यसैकारण पनि धोनीको लागि आजको खेल निकै महत्वपूर्ण छ । केकेआरसँग खेल्न जब धोनी मैदानमा उत्रने छन् तब उनले एउटा नयाँ रेकर्ड पनि बनाउने छन् । हो, उनी आज टि–२० क्रिकेटमा ३०० औं खेलमा कप्तानको भूमिकाका मैदानमा देखिने छ ।
उता, कोलकाताका कप्तान ओएन मोर्गनले सन् २०१९ मा इंग्ल्याण्डलाई पहिलोपटक एकदिवसीय क्रिकेटका विश्व च्याम्पियन बताएका थिए । उनले सोही सफलता अब कोलकातासँग दोहो–याउन चाहन्छन् । कोलकाताको टोलीले आईपीएल २०२१ को दोस्रो चरणका खेलहरूमा शानदार प्रदर्शन गरिरहेको छ । टोलीले दोस्रो चरणमा खेलिएका ९ मध्ये ७ मा जीत हासिल गरेको छ । उता, चेन्नईले भने पहिलो क्वालिफायरमा दिल्ली क्यापिटल्सलाई हराएर फाइनलमा पुगेको हो । उक्त खेलअघि चेन्नईले लगातार तीन खेलमा हारको सामना गरेको थियो ।
चेन्नईको सम्भावित प्लेइङ–११ : रुतुराज गायकवाड, फाफ डुप्लेसिस, रोबिन उथप्पा, मोइन अली, अम्बाती रायडू, एमएस धोनी (कप्तान/विकेटकिपर), रविन्द्र जडेजा, ड्वेन ब्रावो, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर र जोश हेजलवुड।